कस्ता मानिसलाई हुन्छ क्यान्सरको जोखिम ? - Purbeli News
कस्ता मानिसलाई हुन्छ क्यान्सरको जोखिम ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २२, २०७६ समय: १२:४८:०८
क्यान्सरका थुपै कारण हुन सक्छन्, तर सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको हाम्रो जीवनशैली र खानपिन नै हो । त्यसैले यसबाट बच्नका लागि आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ ।
चुरोट पिउँदा फोक्सोको क्यान्सर, किड्नीको क्यान्सर ब्ल्याडरको क्यान्सर र गर्भाशयको क्यान्सर हुन सक्छ । सुर्ति र गुट्खा खाँदा मुख र पाचन ग्रन्थिमा क्यान्सर हुन सक्छ । क्यान्सरमा ९० प्रतिशत घटनामा यसको सबैभन्दा ठूलो कारण चुरोट वा सुर्ति नै रहेको पाइएको छ ।
बिंडी वा चुरोट पिउँदा शरीरमा क्यान्सर उत्पादक तत्व प्रवेश गर्छन् । यी तत्वले स्वस्थ कोशिकाहरुलाई रोगी कोशिकाहरुमा बदलिदिन्छन् र यही कोशिकाहरु क्यान्सरमा परिणत हुन्छन् ।
सनस्त्रिmनले केही हदसम्म यी हानिकारक किरणहरुको प्रभावबाट बचाउँछ । तर, यसका अलावा घाममा निस्कदा आफ्नो पुरा शरीरलाई ढाक्नु उपयुक्त हुन्छ । आँखालाई यी हानिकारक किरणहरुबाट बचाउनका लागि सनग्लास लगाउने र बढि गाढा रंगका लुगा लगाउनुपर्छ ।